Amanzi - esinye sezici ezikhanga kakhulu, ekujuleni kolwandle ezikhanga kanye obathandayo. Baningi ngamabhayisikobho nangezincwadi ukutshela mayelana expanses engaziwa nezimfumbe mayelana amagugu kanye pirates. Abaningi ingane Wayefisa ukuba itilosi, thola ekujuleni nhlobo futhi hlola ezivulekile fabulous. Sailor - lena kungeminye yemisebenzi ejabulisa kakhulu futhi iyingozi, eziyinkimbinkimbi futhi unzima.
Lo mkhumbi - lena iqoqo eziyinkimbinkimbi kakhulu imithombo lobuchwepheshe kanye womuntu. Ngaphezu iqembu nenduna olwandle, kumhlaba udondolo enkulu inkonzo bomkhumbi, ukuqinisekisa lenqubekela phambili kanye nokusebenza navigation efanele, uqaphe izimo zezulu, futhi, okungenani ngokungaqondile, inikeza ukulawula umkhumbi ngamunye olwandle.
"Phawula ukuthi Mariners"
Pacific ukuhlala ezindaweni ezingalindelekile kakhulu futhi nhlobo kule planethi yethu. ukuhlolwa izinhlelo kanye nokuqapha yimuphi izinguquko izimo zezulu ezimweni eziningi kungavimbela imiphumela engelapheki. "Phawula ukuthi Mariners" - ukushicilelwa esemthethweni ukukhululwa zesikhathi imvamisa lwezindaba 48 ngonyaka, okusho azisa umyalo kolwandle phezu navigation imvelo futhi izinguquko zalo mode nge-navigation.
Phawula ukuba Mariners, kuhloswe ukuba azise umyalo omkhumbi, okuyinto isikhathi eside olwandle noma ukuwela amanzi namanye amazwe, izinguquko navigation amamephu yekuhlungwa izinzuzo ukubhukuda. Iqoqo lwazi kusiza ibhodi zokuphatha bomkhumbi sokulandela inkambo isethi, kungaphuli imithetho bese ukhetha imizila emfushane.
Kudinga isikhathi ngokunembile, ukunemba kanye Ukwenza sokushicilela ezifana "Isaziso Mariners". UMnyango Wezokuvikela eduze ingamela udaba ngalunye. Basuke eshicilelwe masonto onke, ngeMigqibelo, ngamunye inikezwa inamba ye-serial. Kukhona 200 nezindaba ehlukene. Igumbi ngasinye sibandakanya uhla amabalazwe, abaqondisi kanye iziqondiso, nezinguquko zakamuva. Endaweni yokuqala Niphiwe uhlu amakhadi. Okwesibili, uyasuka izinkomba, kulandelwa incazelo yazo zonke izibani futhi izimpawu in inyuka oda izinombolo zabo Admiral sika. "Isaziso Mariners" has izigaba eziningana. I "wahlela uchungechunge" ibonisa, njengoba umthetho, amagama wezilwandle, ezilwandle kanye ezifundeni zazo, okuphambene esimelela ukukhululwa kwekhasi ekhombisa nokubekwa izaziso eziphathelene sendawo ethile. Lesi sigaba esilandelayo siqokomisa izinguquko amabalazwe kanye navigation. Olunye ulwazi lutholakala kwi Iincwajana yekuhlungwa nabaqondisi. Futhi ekugcineni - izixwayiso olwandle futhi imibhalo NAVIP. Zonke liqukethe ulwazi olufanele ematilosini, ngaphandle okuyinto akunakwenzeka, akukho indlela yokungena olwandle. Lokho kukhombisa ukuthi kubaluleke inkonzo ukulawula wemfanelo futhi phansi, ukusebenza efanele futhi ifike ngesikhathi zazo kuncike navigation ephephile futhi ngaphandle kwezithikamezo.
Erbium: kuzibuyekezo, izintengo. Erbium Laser Fractional
Njengoba e "Maynkraft" ocelot ezinokuthula futhi kungani?
Yini amakhowe asendleleni izakhiwo kanye nezici
Anapa, "Vita" - yokungcebeleka, okuyinto wena baphupha
"Oriflame", "Giordani Igolide": incazelo Izimonyo
Isikhumulo sezindiza saseRio de Janeiro: isango eliyinhloko lomoya waseBrazil